Maxkamadda Sare oo dab ku sii shiday muranka Aqalka Wakiillada
Home WARARKA Maxkamadda Sare oo dab ku sii shiday muranka Aqalka Wakiillada
Hargeysa(Berberanews):- Maxkamadda Sare ee Somaliland, ayaa dab ku sii shiday murankii labada garan u qaybiyay Xildhibaannada Wakiillada oo ka dhashay qaabkii loo doortay Guddoomiyaha Golahaahaas sideedii bishan. ka dibna uu Maxkamadda dacwad u gudbiyay Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo ku dooday in lays daba mariyay Xildhibaannada u codeeyay isaga iyo kuwii Baashe Maxamed Faarax.
Maxkamadda Sare ayaa Qaraar ka soo baxay Sabtidii Maanta, waxa lagu sheegay in Dacwadda Xildhibaan Talyanle aanay waafaqsanayn nidaamka Dacwadaha Dastuuriga ah ee ay Maxkamaduhu ka garnaqaan, taa beddelkeeda ay la xidhiidho Dacwad qaabka Codayntii lixdii bishan ee doorashada Guddoomiyaha Golaha Wakiillada la xidhiidha, isla markaana ay timi ka dib go’aan Gole iyo Aqbalaadda Natiijadii doorashada ka dib. Sidaa daraaddeedna ay tahay oo ay Maxkamaddu go’aaminayso in Golaha Wakiilladu ku xalliyaan murankaa dhexdooda ah Xeer-hoosaadkooda oo caddaynaya qaabka Codaynta iyo Murannada Codaynta ka dhasha nidaamka loo saxayo ama loo sixi karo.
Qaraarka Maxkamadda Sare ee Somaliland ka soo baxay oo uu Guddoomiyaha Maxkamaddaas Garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed iyo Garsoorayaasha Maxkamaddu ku saxeexan yihiin oo Warbaahintu heshay, ayaa sidoo kale lagu sheegay in Codayntu qaabkii ay u dhacday markay Maxkamaddu eegtay waafaqsanayd nidaamka uu qeexayo Xeer-hoosaadka Golaha Wakiillada u yaalla.
Gaar ahaan waxay Maxkamaddu soo qaadatay Qodobka 37-aad oo ka hadlaya soojeedimaha Golaha iyo 42-aad oo ka hadlaya noocyada codaynta iyo murannadooda sida loo xallinayo, maaddaama oo ay Codayntu waafaqsanayd qodobbadaas, isla markaana uu Talyanle aqbalay natiijada ka dib, markay Maxkamaddu deristay Qodobbo Dastuuri ah iyo Xeerarka ku taxaluqa Dacwaddan, waxay qaraarisay ama go’aamisay in Golaha Wakiilladu gudohooda iyagoo adeegsanaya Xeer-hoosaadkooda ku xalliyaan Murankan.
Waraaqaha Qaraarka Maxkamadda Sare ka soo saartay Dacwadda doorashadii Guddoomiyaha Golaha Wakiilalda ee Xildhibaan Talyanle u gudbiyey oo Warbaahinta Berberanews.com heshay Caawa, waxay u dhignaayeen Sida ka Muuqata Waraaqahaas oo Sawir ah oo aan idiinku soo gudbinayno halkan hoose ee ka Bogasho wacan:-
Previous articleUhuru Kenyatta oo ku guulaystay doorashada Kenya
Next articleAlshabaab oo dhallinyaro ku toogtay Jammaame